फ्याभिकन जेनरेटर: फ्याभिकन कसरी बनाउने
फ्याभिकन जेनरेटर: तपाईसँग फ्याभिकन किन छैन?
शनिबार, अक्टोबर 11, 2008 बिहीबार, जुन 25, 2015 Douglas Karr
यो तुच्छ लाग्न सक्छ, तर प्रत्येक चोटि जब म एक सुन्दर साइटमा पुग्छु र त्यहाँ कुनै सम्बन्धित मनपर्ने आईकन ब्राउजरमा प्रदर्शन गरिएको छैन, म अचम्म लाग्छ किन काम समाप्त भएको छैन। हो, मेरो फेभिकॉन त्यो शानदार छैन ... मँ केहि प्राप्त गर्न चाहान्छु कि अरूले मेरो साइटलाई फरक गर्‍यो:
मूल फ्याभिकन सेटअप
यदि तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको लागि फेभिकन सेटअप गर्नुभएको छैन भने, यो अविश्वसनीय रूपमा सरल छ। सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको भनिन्छ एक आइकन फाइल ड्रप गर्न favicon.ico तपाइँको वेबसाइट को मूल निर्देशिका मा। यो जस्तै आइकन प्रोग्रामहरू लिन प्रयोग गर्‍यो माइक्रोएन्जेलो (एक उत्तम आइकन विकास अनुप्रयोग) तर त्यहाँ उत्कृष्ट छन् वैकल्पिक आइकन निर्माण उपकरणहरू अनलाइन!
केवल डाईनेमिक ड्राइभमा कुनै छवि फाइल अपलोड गर्नुहोस्, फाइल आउटपुट गर्नुहोस्, र तपाईंको मूल निर्देशिकाहरूमा यसलाई ड्रप गर्नुहोस्। सबै आधुनिक ब्राउजरहरूले यस पट्टीलाई ठेगाना पट्टीमा खोज्दछन् र प्रदर्शन गर्दछ।
उन्नत फ्याभिकन सेटअप
यदि तपाईं आफ्नो साइट कडाई गर्न चाहनुहुन्छ र राम्रोसँग मनपर्ने आइकनको विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ केही हेडर एचटीएमएल तपाईंले इनपुट गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं WordPress प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं त्यो टेम्पलेटको Header.php मा कोड थप्न सक्नुहुन्छ खण्ड।
टैग: एनिमेटेड फेविकॉनफ्याफिकनफेभिकन जेनरेटर
निलोलोक भिडियो: क्लाउड कम्प्युटि।
भवन निर्माण प्राधिकरणको रहस्य र तपाईंको ब्लगको प्रमोटिंग
अक्टूबर २१, २०१ at २:०12 बिहान
राम्रो टिप, डग। तत्काल हाम्रो वेबसाइटमा जादूको एक बिट थप्नु पर्ने थियो 😉
http://abitofmagic.no/english - अब एनिमेटेड फेविकॉनको साथ।
धेरै राम्रो एनिमेटेड gif! राम्रो!
फेभिकन बनाउनु वास्तवमा मेरो वेब साइटको पुन: डिजाइनको आवश्यकताहरु मध्ये एक हो। मैले यसमा जिद्दी गरें।
मलाई लाग्छ कि यो सबैको साइट, पेट्रिकमा हुनुपर्दछ। मैले ग्राफिक कलाकारसँग काम गरें जुन आइकन सिर्जनामा ​​विशेषज्ञता पायो र यो वास्तवमै एक कला पनि हो!
म अझै माइक्रोएन्जेलो प्रयोग गर्दछु। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन भने, तपाईं फेभिकनमा धेरै आकारहरू इम्बेड गर्न सक्नुहुनेछ यदि कोहीले यसलाई डेस्कटपमा तान्छ भने (वा समान) तपाईं १× × १ version संस्करणको साथ अडीक हुनुहुन्न।
मैले भनेको हुनुपर्दछ, परिभाषा द्वारा एक आइकन फाइल विभिन्न आकार छविहरूको संग्रह हो। फ्याभिकन जेनरेटरले बहु तहहरू पनि सिर्जना गर्दछ!